China KingKong 3 igbu katrij igwe rụpụta na rụpụta | MOLON
German coreless moto
Ọsọ ntụgharị: 12V 11000rpm
480 nnukwu torque
AIR FREIGHT: Thezọ kachasị mma iji ụgbọ mmiri buru ibu (ihe karịrị 100kg) ma ọ bụ mgbe usoro iheomume gị enweghị ike ichere maka ibu mmiri. Ọnụego ikuku na-adabere na ibu na olu. Fọdụ ihe dị ka ụfụfụ na-ewe ọtụtụ ohere mana ọ na-adịcha mfe ma ụfọdụ ihe dịka iron dị arọ nke ukwuu mana ọ na-ewe obere ohere. Ọnụ ego nke ịrụ ọrụ n'ezie na-ebu ibu na olu ma na-echebara ya echiche. Na mkpokọta, oge ngafe abụghịzi ụbọchị iri na-arụ ọrụ yana ọ bụ naanị ụbọchị 3-5. (Biko mara na ngwongwo ikuku bụ naanị nnyefe na ọdụ ụgbọ elu kacha nso gị. Agentlọ ọrụ na-ebu ibu gị ga-achọkwa ịsachasị kọstọm na njem ụgbọ njem na ụlọ nkwakọba ihe gị). Air Waybill (AWB) bu ihe nlere nke akwukwo nke nkwekọrịta n’etiti EM na onye ebu ya. A ga-ebufe AWB na ngwongwo ikuku ma jee ozi dị ka nnata nnyefe, ụdị akwụkwọ ọnụahịa, akwụkwọ mkpuchi, yana akwụkwọ achọrọ maka mkpochapụ kọstọm.
ỌBRE AKWIGHTKWỌ: Thezọ kachasị dị irè ma bụrụ isi ụzọ mbufe maka azụmaahịa na mbupụ mba ụwa. Anyị nwere ike ịhazi mbupu site na ụlọ ọrụ anyị, site na ọdụ ụgbọ mmiri kacha nso dị nso na Shanghai, gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri kacha nso gị, ma ọ bụ n'ụzọ niile maka ụlọ ọrụ gị (agunyeghi tarifu na ụtụ isi). Anyị nwere ike ibute ibu ngwongwo zuru ezu (FCL) ma ọ bụ ihe na-erughị ibu zuru ezu (LCL). Ọnụego maka akpa 40 only bụ naanị ihe dị ka 50% karịa 20 ′ akpa na 40 ′ HQ bụ ihe dịka ọnụahịa ahụ 40 ′ GP. Max ibu bụ banyere 20 tọn. Ndị na-ere ahịa anyị nwere ike ịdụ gị ọdụ gbasara ndụmọdụ mbupu. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ihe na-erughị 8cmb anyị ga-adụ gị ọdụ ka ị buga LCL. Ọ bụrụ na ị gafeela 15cbm ị nwere ike ịtụle ịzụrụ ihe iji buru ngwongwo zuru ezu ebe ọ bụ na ụzọ dị ọnụ ala ga-esi bupụrụ FCL. Ihe kacha nta dị arọ / olu maka LCL bụ 1 cbm ma ọ bụ 1 ton, yabụ maka iwu n'okpuru 100kg anyị nwere ike ịtụ aro ụgbọ elu ma ọ bụ ọbụna kwupụta mbupu.
Ationgbọ njem site n'oké osimiri dị nwayọ nwayọ nke mere atụmatụ dị mma bụ isi. Anyị na-atụ aro ịtụkwasị iwu 3 ọnwa tupu. Ọmụmaatụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ngwongwo gị maka oge ekeresimesi, ị ga - edozi iwu gị n’ọnwa Ọgọst ma ọ bụ ọbụna tupu oge eruo. I nwekwara ike kewaa mbupu gị gaa n'akụkụ 2: obere pasent site na ikuku, zuo ike n'oké osimiri.
Ikpocha ma buru ma ọ bụ nyefee iwu gị nwere ike ịbụ onye na-azụ ahịa ma ọ bụ onye na-ere ahịa na mpaghara. Ga-ezigharị ike itinye akwụkwọ ntinye na kọstọm, hazie maka ịkwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla, ụtụ isi na ụgwọ ndị ọzọ. Dabere na mba ahụ, ọ nwere ike ịghọ aghụghọ; yabụ anyị na-atụ aro iji ndị na-eme omenala maka enyemaka. Anyị ga-enye gị Bill nke Lading, Akwụkwọ ọnụahịa, Asambodo Mmalite, na Ndepụta Mbupu. Na-elele anya mgbe niile iji hụ na ozi ahụ zuru oke ma zie ezi ma zigara ha onye na-azụ ahịa omenala gị ozugbo enwere ike.
Nke gara aga: Hurricane White Plastic Disposable Atụmatụ
Osote: Dị Achọgharịrị attdị Agbanwe Agbanwe Black Black Arm Rest
5PCS & 3PCS ịkpọpu Forceps attdị Mgbu ...
Lightning II Lithium Batrị Tatoo Pen
Onwe-eguzogide ink dee iko iko njide
1pc Tattoo Bead Ball Grabber 4 mboanu Ala igwe anaghị S ...